Wareysiga Cabdinuur Darmaan - BBC Somali
Wareysiga Cabdinuur Darmaan
Image caption Cabdinuur Darmaan waxa uu sheegtaa inuu yahay Madaxweynaha Soomaaliya.
Cabdinur Darmaan, ayaa waxaa uu heshiis la galay sharikad Jarmal ah oo ay u shaqeeyaan askar Jarmal ah oo hawlgabtay in ay u tababbaraan ciidan Soomaaliyeed. Cabdinur wuxuu hore u sheegtay in uu yahay Madaxweynaha Soomaaliya.
Wareysi ay BBC la yeelatay ayaa Cabdinur Darman waxa uu ku sheegay in kadib markii ay arkeen dhibaatada ka taagan Soomaaliya in ciidamo uu weydiistay shirkaddaasi Jarmalka ah oo la yiraahdo Asgaard German Security Group, si tababar loo siiyo ciidamo uu sheegay in Soomaaliya ay u joogaan.
Cabdinuur Darmaan oo sheegta in loo doortay Madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2003 ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax burcad badeed Soomaali ah, balse ay yihiin rag loo diiday in ka kalluumeystaan biyaha Soomaaliya, taasina ay ku qasabtay in ay hawshaasi galaan, sida uu yiri.
Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego lacagta uga baxaysa mashruucan iyo cidda taageereysa, isagoo dhaliilay in ay khalad tahay in Soomaaliya looga soo dhiso dowlad dibedda.
Qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC oo fikradahooda ka soo dhiibtay wareysiga Cabdinuur Darmaan ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay, halka qaar kalena ay sheegeen in maamulada Soomaaliya ee xilligan aanay waxba dhaamin sheegashada uu Madaxweynaha sheeganayo